Dingana voalohany ho an'ny Subway Karabağlar | RayHaber
[01 / 12 / 2019] TMMOB Kanal Istanbul tetik'asa iray nomanin'ny olombelona	34 Istanbul
[01 / 12 / 2019] Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetik'asa fanalam-pirenena	41 Kocaeli
[01 / 12 / 2019] 300 Sivy an'arivony no nifindra nankany Baku Tbilisi Kars Railway Line	36 Kars
[01 / 12 / 2019] Ny atrikasa momba ny horohorontany tany Istanbul dia manomboka rahampitso	34 Istanbul
[01 / 12 / 2019] Soso-kevitra mahaliana ho an'ny lalana Metrobus	34 Istanbul
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka35 IzmirDingana voalohany ho an'ny lalamby Karabağlar
13 / 11 / 2019 35 Izmir, Railway, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, SARINTANY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, TORKIA
dingana voalohany ho an'ny lalamby Karabakh
Dingana voalohany ho an'ny lalamby Karabağlar; Munzmir Metropolitan Munisipaly dia hampiditra an'i Karabağlar amin'ny tambajotram-pitaterana an-dalamby. Nanomboka ny tolotra ho an'ny tetikasa sy ny fananganana ny lalana metro Halkapınar-Karabağlar.
Munzmir Metropolitan Munich dia manao dingana vaovao hamolavola zotra rafitry ny lalambe 179 kilometatra. İzmir Metropolitan Municipality Suburban sy Rail System Investigation Department, mamolavola ny tetik'asa metro Halkapınar-Karabağlar. Raikitra ny tenda ary raikitra ny fironana. Raha tsy misy fitsipi-pitondrana ao anatin'ny vanim-potoana ara-dalàna, dia nokasaina hatao ny sonia miaraka amin'ny orinasa mandresy amin'ny Desambra 2019.
Heverina fa manomboka amin'ny roa taona ny fananganana
Vitao amin'ny 2020 ny tetikasa farany. Aorian'izay, ny fangatahana "fankatoavana" dia hatao voalohany amin'ny Tale jeneralin'ny Famatsiam-bolan'ny fotodrafitrasa eo ambanin'ny Ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa ary avy eo amin'ny fiadidian'ny paikady sy tetibola. Andrasana ny fotoana haharitra roa taona eo ho eo. Hanomboka amin'ny fampidirana ny tetikasa ao anatin'ny fandaharan'asan'ny fampiasam-bola ny fizotran'ny asa fananganana sy fananganana. Lalana kilometatra ambanin'ny tany 28 kilometatra ambanin'ny tany. Raha tsy misy fahatarana ny dingana fankatoavana, dia antenaina hanomboka afaka roa taona ny fananganana ny tsipika metro Halkapınar-Karabağlar.
"Hianatra Izmir amin'ny haraton'ny vy isika"
Mayorzmir Metropolitan Mayor Tunç Soyer dia nilaza fa haorina eo amin'ny làlan'ny Halkapınar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Street-Gaziemir-Yeni Fair Area-Adnan Menderes, ny tsipika metro. Nanamafy i Soyer fa ny fanamorana ny 16 arivo metatra tokony hatao alohan'ny fanamboarana. Tsy mbola fantatra ny isa sy ny toerana misy ireo onjam-peo. Ny rehetra dia ho voafaritra mandritra ny tetik'asa, raha ny antontan'isa statistika ary amin'ny alàlan'ny fanadihadiana ataon'ny olona. Ho fanampin'ny tetikasa lalamby Buca mitohy, Narlıdere dia nahitana ny lalamby lalamby Karabağlar amin'ny fandaharam-potoanantsika ihany koa. Amin'ireo tetik'asa rehetra ireo dia havelantsika handanjalanja ny dingana iray tena ilaina amin'ny fametahana İzmir miaraka amin'ny harato vy ağ.
Faritra metro Halkapınar Karabağlar
Dingana voalohany ho an'ny metro Sultanbeyli
Dingana voalohany ho an'ny fiara fitaterana ao Konya
3. Ny dingana voalohany amin'ny anaran'ny seranam-piaramanidina dia nalaina tao amin'ny Google
Rusyaianà lalamby any Russia
Malatya-Elazığ-Diyarbakır High Speed ​​Train Train İçin
Ny dingana voalohany dia nalaina tao amin'ny tetikasa Metro ao Istanbul-Kocaeli
Ny dingana voalohany dia nalaina ho an'ny fiara fitaterana an-tsambo ao Izmir
Dingana iray hafa nalaina tao amin'ny tranom-pampidirana momba ny fitaterana an'i İzmir
Ny filohan'i ATSO Alpaslan: "zava-dehibe ho an'ny lalamby"
Dingana voalohany ho an'ny tetikasa System System Light Rail Mersin
Ny dingana voalohany dia nalaina tao amin'ny Kabine Uzungöl
Dingana Voalohany ho an'ny Kabinetra Kabinetra Uzungöl ary sosialy
Istanbulkart lasa karatra fiantsenana iraisam-pirenena…
Androany amin'ny tantara: lalamby 2 Desambra 1861 Rumeli
TMMOB Kanal Istanbul tetik'asa iray nomanin'ny olombelona
Kayseri Erciyes Nampidirina tamin'ny Fizahantany Thai
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetik'asa fanalam-pirenena
Soso-kevitra mahaliana ho an'ny lalana Metrobus
Tetikasa Kanal Istanbul mba hisy fiantraikany amin'ny fifandanjan'ny toetrandro ao amin'ny faritra
Tsy mila overpass i Megenli
Ny lozam-pifamoivoizana niantso ny fialana